Cinga ngayo ukuba ungayithintela njani intlekele yemozulu, nguBill Gates
Iindaba khange zincome ixesha elide, nditsho nakwicandelo lezemidlalo (lomlandeli wezemidlalo Zaragoza yokwenyani ngaphezu koko). Kwaye kukuba, ukuqhula ecaleni, umba wehlabathi, utshintsho lwemozulu lwaliwe ngumzala kaRajoy wezenzululwazi, kwaye oku intsholongwane ye-Corona Ukutshintsha ngovuyo kwaye kubi kakhulu, kubonakala ngathi kukho iyelenqe phakathi kukaMalthus, uNostradamus kunye nomlawuli othile waseMeya.
Kwaye kwezi kuza uBill Gates, umntu opha abanye abantu ekugxilwe kubo ngabalandeli beplandemics nabanye, kwaye usinika incwadi enemiyalelo yakutshanje yokusinda kwintlekele esizinikezela kuyo sinokholo olungaboniyo ukuzibulala. Ewe, lo mbandela ubonakala unzima kakhulu ngenxa ye-inertias yokuzilimaza ye Impucuko yethu Okwangoku, abagulayo ngokungcakaza njengoyena ndoqo woqoqosho lonke, kunye nobuntwana kunye neziyatha kunanini na ngaphambili. Okwangoku, okanye ngokuchanekileyo ngenxa yoko, lixesha lokumamela iiGates ...
UBill Gates uchithe ishumi leminyaka ephanda ngotshintsho lwemozulu. Ukhokelwa ziingcali zefiziksi, ikhemistri, ibhayoloji, injineli, isayensi yezopolitiko, kunye nezemali, ugxile ekumiseleni amanyathelo ekufuneka siwathathile ukumisa ugqatso lomhlaba kwintlekele yendalo esingqongileyo. Kule ncwadi, umbhali akaqokeleli nje ulwazi olusisiseko lokusenza siqonde isidingo sokuphelisa ukukhutshwa kwegesi, kodwa ukwacacisa nento ekufuneka siyenzile ukufezekisa le njongo ibalulekileyo.
Amasango asinika inkcazo entle yemiceli mingeni esijongene nayo. Ukuthatha ulwazi lakhe kwizinto ezintsha nakwinto ekuthethwa ngayo ukwazisa iikhonsepthi ezintsha kwintengiso, unika iinkcukacha ngamacandelo itekhnoloji esele inceda ukunciphisa ukukhutshwa, njani kwaye nini iteknoloji iya kwenziwa isebenze ngakumbi, apho sifuna khona inkqubela phambili. Kwaye ngubani osebenza kolu phuculo lufunekayo.
Okokugqibela, icacisa isicwangciso esisebenzayo nesichaziweyo sokufikelela ekukhutshweni okungathathi ntweni, zombini ngemigaqo-nkqubo karhulumente nakwizikhundla zobuqu, ke oko kubandakanya oorhulumente, iinkampani kunye neziqu zethu kulo msebenzi ubalulekileyo. Njengoko uBill Gates elumkisa, ukuhlangabezana neenjongo zokukhutshwa kwe-zero akuyi kuba ngumsebenzi olula, kodwa sinako ukufikelela kuko ukuba silandela izikhokelo zakhe.
Ngoku ungayithenga incwadi "Ungayinqanda njani iNtlekele yezeMozulu: Izisombululo esele sinazo kunye nePhuculo esisaLifunayo" nguBill Gates, apha.
Iilebula IBill Bill, Iincwadi zangoku, Iincwadi zesayensi
Inqaku eli-1 ku "Indlela yokuphepha intlekele yemozulu, nguBill Gates"
Pingback: Indlela yokuNqanda iBhili yeeSango zeNtlekele yeMozulu « Raul Barral Tamayo's Blog